Beesha Caalamka oo war ka soo saartay guddiyadii ay magacaabeen Puntland iyo Jubbaland – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay guddiyadii ay magacaabeen Puntland iyo Jubbaland
Allhadaaftimo January 29, 2021 Uncategorized
War-saxaafadeed ay soo saartay Beesha Caalamka ayaa waxaa lagu soo dhoweeyay guddiyada ay soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaa oo ay dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay in aan loo marin habraacii saxda ahaa.
Beesha Caalamka ayaa dowlad goboleedyada iyo dowladda Federaalka ugu baaqay wada-hadal dhexmara, kaasi lagu xallinayo muranka doorashada ee weli taagan.
Saaxiibada beesha caalamku waxay soo dhoweynayaan magacaabidda Guddiyada Heer Dowlad Goboleed ee Hirgelinta Doorashada Jubaland iyo Puntland, ee la soo bandhigay 27ka bisha Janaayo. Inkastoo ay soo daahday, tallaabadan wanaagsan waaxay gacan ka geysan kartaa abuuridda jawi degdeg loogu hirgeliyo hanaanka doorashada ee heshiiskii 17kii Sebtembar si loo wada dhanyahay oo la isku raacsanyahay.
Saaxiibada beesha caalamku waxay si buuxda u taageerayaan soo jeedinta ah in si degdeg ah loo qabto kulan dhexmara madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah, si loo xalliyo arrimaha hirgelinta doorashada ee harsan si horey loogu socdo qabashada doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo loo wada dhanyahay.
Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Belgium, Denmark, Masar, Itoobiya, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur-Goboleedka (IGAD), Ireland, Talyaaniga, Holand, Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka (OIC), Suudaan, Iswiidhan, Iswisarland, Turkey, Ughaanda, Boqortooyada Midowday ee Britain, Dowladda Maraykanka, ee Qaramada Midoobay
Previous War Murtiyeed Wadajir ah oo ay soo Saareen Dowlada Puntland iyo Jubaland
Next Mareykanka “Ma aqbaleyno doorashooyin is-barbar socda